बिहेको लागी केटा खोज्दै: मलाई जुन जातको केटा भएनी हुन्छ, असल र इमानदार चाहियो !
February 17, 2022 AdminLeaveaComment on बिहेको लागी केटा खोज्दै: मलाई जुन जातको केटा भएनी हुन्छ, असल र इमानदार चाहियो !
मीना ढकाल, उनको उमेर सायद ४५ को हाराहारीको हुँदो हो। तर उनको चुरीफुरी १६ वर्षे युवतीको भन्दा कम छैन। रमाइलो गर्ने उमेरले होइन मनले हो चाहनाले हो, रहरले हो भन्ने गतिलो उदाहरण हुन् उनी। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनका १२ हजारभन्दा बढी फलोअर छन् भने उनले बनाएका प्रत्येक भिडियोहरू १५ हजारभन्दा बढीले लाइक गर्ने गरेका छन्।
राती राती अ श्लि ल म्यासेज गरेपछि यस्तो निर्णय लिइन् पुरा पढ्नुहोस !